Bhinzi dzegirinhi nembatatisi yakagochwa | Kicheni Mapepa
Bhinzi dzegirinhi nembatatisi yakagochwa
Mapepa akadai anotora nzvimbo yakakosha patafura. Zvakareruka, zvine hutano… Ndiwo mabiro akaita bhinzi yakasvibira ine mbatatisi yakakangwa. Sarudzo huru yekupedzisa menyu yedu yekudya kwemasikati uye kwemanheru, haufunge? Uye kuigadzirira hakuzokutorere anopfuura maminetsi makumi maviri.
Iyo nguva inotora iwe kunyorera mbatatisi, ichave iri nguva ichatora kugadzirira iyi resipi. Nhau dzakanaka ndedzekuti mese munogona kubika bhinzi yakasvibira uye kugocha mbatatisi husiku hwapfuura Nekudaro, iwe unofanirwa kungoipisa, wedzera zvaunofarira zvinonhuwira uye zvipfeke neinodonhedza yemamwe mhandara maorivhi emafuta.
Mbiya yebhinzi yakasvibira ine mbatatisi yakagochwa senge iyo yatinofunga kugadzirira nhasi ndiyo sarudzo huru yekudya kwemasikati nekudya kwemanheru.
Recipe mhando: kuru
1 mbatata diki
300 g. bhinzi yegirini
Isu tinosuka mbatatisi pasi pemupombi wemvura kubvisa tsvina yakanamatira paganda.
Isu tinosvuura mbatatisi uye tinocheka kuita zvidimbu zvishoma kudarika hafu yesentimita.
Isu tinoisa zvimedu mundiro yekubheka yakarongedzwa negirosa risinganyorwe mapepa ndokuzviparadzira zvishoma nemusanganiswa we mafuta omuorivhi nezvinonhuwira.
Isu tinobheka pa200ºC kwemaminetsi makumi maviri neshanu, kusvika zvinyoro.
Kunyange, tinosuka bhinzi, cheka matipi uye cheka yega yega kuita zvidimbu zviviri kana zvitatu.
Kana yagadzirirwa, iyo tinobika mumvura yakawanda kuvira uye pini yemunyu kwemaminitsi makumi maviri kana kusvika nyoro.
Isu tinosanganisa bhinzi dzegirinhi nembatatisi yakagochwa, kuwedzera mhiripiri pamwe nezvimwe zvinonhuwira zvatinoda uye mvura nemafuta emuorivhi kuwedzera mhandara.
Yakazara nzira kuchinyorwa: kudzidziswa » Zvidyo » Vegetable Recipes » Bhinzi dzegirinhi nembatatisi yakagochwa
Mozzarella yakazadza nyama dzekudya